Bkwụ ụgwọ ikuku site na magazinekwụ na ntanetị akwụkwọ dị na ụlọ ahịa akwụkwọ na mba 7 site na 2019
Bkwụ bkwụ na Airkwụ ikuku bụ forlọ Nche maka ndị na - ese ihe niile:
Bkwụ bkwụ ikuku site na Nzọụkwụ bụ maka ndị niile nwere mmasị na isiokwu ikuku ikuku dị mkpa ma chọọ imeziwanye ụzọ ọrụ ikuku site na ndụmọdụ okike na ozi ndị bụ isi.
Bkwụkwụ na bkwụ na - enye ntuziaka nzọụkwụ maka ihe atụ nke ikuku ikuku na ọkwa ihe isi ike dị iche iche. Ọ na-enye ihe ọmụma bụ isi na ndụmọdụ ọkachamara, na-ewetara ngwaahịa dị ugbu a na usoro ọhụụ ma na-ewetara akụkọ na akụkọ banyere isiokwu nke ikuku ikuku na ihe atụ.
Bkwụ Airkwụ ikuku site na Nzọụkwụ, ọtụtụ ihe bara uru ma na-egosipụta ụdị ọdịnaya: usoro ihe ọmụma dị mkpa, ịkọ akụkọ, ajụjụ ọnụ onye na-ese ihe na ihe ngosi, ihe omume na ule dị ugbu a na akụkọ bara uru na-akpọ gị ka ị gụọ, ịchọgharị, nyochaa na nyochaa chikọta akwukwo.
Bido na mbipụta ọhụrụ 01/19, mbipụta Bekee nke Airbrush nzọpụ site na alsokwụ na magazinekwụ Magazine ga-erekwa n'akwụkwọ na ụlọ ahịa akwụkwọ akụkọ na mba 7, ya bụ na USA, United Kingdom, Spain, Portugal, Brazil, Canada na Australia . A na-ebipụta magazinelọ Nche nke Ikuku jiri Agụ Ikwu site na Nkọwa Bekee kemgbe afọ 11. Ruo ugbu a, ederela naanị na ụlọ ahịa ọkọnọ ikuku, site na ndenye aha yana na ntanetị.
N'ihi eziokwu ahụ bụ na a ga-ahụ maka nkesa mba ụwa site na UK, ọnụahịa nnomi na mkpuchi ahụ ga-egosi 6,99 GBP. Mbipụta na ibipụta a ka “mere na Germany”. AStù ASBS nwere obi uto na akwụkwọ akụkọ ahụ ga-adị na ụlọ ahịa akwụkwọ Barnes & Noble na US. Ọnụ ego US ga-abụ 12.99 USD.
N'ihi oge ezumike, mbupu mba ụwa nke ihe a ga-amalite naanị na Jenụwarị, yabụ, ọ nwere ike wee n'ọnwa Febụwarị ruo mgbe akwụkwọ akụkọ ahụ erutela ụlọ ahịa ndị a kpọtụrụ aha. Nkọwa ndị ọzọ gbasara ụlọ ahịa a kapịrị ọnụ na ndị na-ere ahịa ga-adị tupu etiti ọnwa Jenụwarị.